musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Sakinho". Yedu Bukayo Saka Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekusimuka kweBukayo Saka. Kiredhiti Zuva uye Nettheroy
Kuongorora kwacho kunobatanidza nehupenyu hwake hwepakutanga & hwemhuri, kudzidza uye basa rekuvaka, hupenyu hwepakutanga kwebasa, nzira yake kune mukurumbira nyaya, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hukama, hupenyu hwomunhu, chokwadi chemhuri uye mararamiro nezvimwe.
Ehe, munhu wese anomuona saiye mucheche-anotaridzika anotarisa ane kukunda kukuru kwebhola kutarisira. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoongorora Bukayo Saka's biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Bukayo Saka akazvarwa pa 5th zuva raSeptember 2001 kuvabereki veNigeria muguta reLondon, United Kingdom. Vabereki vake vanobva kuNigeria vanobva kune imwe nyika avo vasati vazvarwa vakasiya Nigeria kuti vagare muLondon vachitsvaga kurarama kwakanaka uye mikana yakawanda yevana vavo vasati vazvarwa.
Paakazvarwa, vabereki vake vakanzi "Bukayo"Rinova zita risinganzwisisike rinoreva"Inowedzera mufaro ”. Bukayo izita rinoshandiswa kakawanda nerudzi rweYoruba yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero Nigeria. Izvi nekureva zvinoreva kuti Busayo Saka ane mhuri yake kubva kurudzi rweYoruba rweNigeria.
Saka akakurira muguta reLondon guta reLondon mune yakadzika-yepakati kirasi yemhuri yemhuri. Baba vake naamai vake vaive sevazhinji vanotama vekuNigeria avo ndakanga ndisina dzidzo yepamusoro yemari asi vaiita mabasa epasi uye kazhinji vaiomerwa nemari kuti vatarisire zvinodikanwa zvemhuri kuUK nekudzokera kuNigeria.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo & Basa Rekuvaka
Sezvakangoita vazhinji vekuNigeria muLondon, nhengo dzemhuri yaBukayo Saka dzaishuvira nhabvu. Kwaive kuda kwavo nhabvu uye kusada kusimudza hupenyu hwavo izvo zvakazoita kuti vafunge nezveBukayo vane bhora rechikoro muLondon.
Hinobatsira nhabvu inoda nhabvu vabereki vaitsigira Arsenal, zvakangoitika kuti wechidiki Bukayo atarise pfungwa yake pakuigadzira kuchikwata chechikoro. Yaive baba vaBukayo Saka vakatora iwo ega basa rekuona kuti mwana wavo agare pasi uye azvininipise mukuda kwake kuchengetedza chikoro chakabudirira chedzidzo. Mumashoko eBukayo;
'Baba vangu vaindikurudzira zvikuru. Kubva ndichiri mudiki, aigara achindichengetedza '
Iko kunyorera kweArsenal nhabvu academy mukati kwaingowanikwa chete kune vadzidzi vane tarenda chaiyo. Nekuti vabereki vake vaiziva kuti Bukayo ine zvese zvazvinotora, havana kuzeza kunyorera. Nomufaro Arsenal academy yakadaidza uye iye akaratidza kukosha kwake, achipfuura miedzo yavo. Panguva ino, kudada kwevabereki vake uye nhengo dzemhuri vaisaziva miganhu.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Saka akatanga basa rake na zvombo'Hale End academy yakanga isiri nyore sezvo yakanga izere nezvibayiro zvakawanda kubva kwaari nevabereki vake. Mumashoko ake;
"Zvaive zvakaoma chaizvo kuti vabereki vangu vandibatsire kusvika pano asi vaigara vachindipa zvese uye vachindidzidzisa"
Iyi kurwira yakapa Saka shuwa nekurudziro yakawanda iyo yakamubatsira kushanda nesimba nguva dzese uye kuve nechokwadi chekupa chaakakwanisa. Kunge shamwari dzake dzechikwata, Saka akasarudza chidhori. Vamwe vachienda navo Thierry Henry, Dennis Bergkamp, nezvimwewo, akasarudza aimbove wechiSweden neArsenal legend, Freddie Ljungberg uyo aimbove murairidzi wevechidiki mukirabhu iyi.
Freddie Ljungberg akabatsira Bukayo Saka kuti ave zvaari nhasi. Image Chikwereti- Football365
Semutambi weU15 academy, Freddie Ljungberg akapa Bukayo Saka chikamu chakanakisa chemazano. Akabatsira Saka kuti arambe achizvininipisa uye kushanda zvakawoma sezvo aitenda kuti mukomana mudiki haazombove mutambi wepamusoro.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Zvese zvakafungidzirwa naFreddie Ljungberg nezvake zvakazoitika. Sezvo Saka akashandura 17 makore, akapihwa kontrakiti yehunyanzvi neArsenal nekusimudzirwa kudivi re under-23. Zvakare, mushure mekutamba zvinoteedzana kushatisa, Saka akadanirwazve muchikwata chechikwata chikuru.
Paakange aine timu yepamusoro, akatanga kutsvaga mukana mumutambo wemakwikwi wekukanganisa basa rake uye kurwisa kukwikwidza. Kutaura nezvemakwikwi, kudzinga Alex Iwobi uye Aaron Ramsey yaive yedambudziko rakakura kudarika mumwe wake waaidzidza naye Reiss Nelson. Iyo yakamirira-yakawanda yekuchinja nzvimbo yekutanga yakauya pa2018 / 2019 Europa League Final uko Saka akatanga asiya chiratidzo chake neicho chinonakidza chiitiko.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Magumo e2018 / 2019 mwaka akaona ese ari maviri Aaron Ramsey uye Alex Iwobi kusiya Arsenal yeJuve neOverton zvakateerana. Izvi zvakapa Bukayo kamuri kuti ave nemakwikwi akaderera, paine munhu mumwe chete mukadhi rake kukwikwidza nzvimbo yekuruboshwe.
Pa 19 Gunyana 2019 yakaona Bukayo Saka aine mupendero mumakwikwi pakati pake naReiss Nelson. Waizviziva here? Pazuva iro, haana kungotora chikoro chete, akapawo vaviri vanobatsira sezvo Arsenal yakakunda 3-0 vachipokana naEintracht Frankfurt mumutambo wavo wekuvhura boka re2019-20 UEFA Europa League. Pazasi pane chidimbu chevhidhiyo chiratidzo.
Bukayo Saka paakazadzisa hope dzehudiki yake yekupa mubairo danho rake rekutanga reArsenal, akapa baba vake nekukurumidza FaceTime Call. “Ini handina kukwanisa kutaura naye nekuti varairidzi vaida kuti ndipinde muaizi yekushambidza kuitira kuti ndipore nekukurumidza mushure memutambo. Isu tinongoisa zvigunwe zvedu kumusoro kune mumwe nemumwe" Akati.
Pane kuumbika neyakajaira kutanga, wekuruboshwe-winger wakaenda kubva pasimba kuenda pasimba. At 18 makore uye 125 Mazuva, Saka anga ari wechidiki weAustralia mutambi mutambi munhoroondo yePremier League kutanga Man Utd vs Arsenal kusawirirana. Akashamisawo vateveri mumutambo nekudzinga vanhu Ashley Young.
Senge panguva yekunyora, Bukayo Saka anoonekwa nevazhinji mafeni sechivimbiso chakanaka chinotevera kuchizvarwa chemapurisa chekuruboshwe shure kwaFreddie Ljungberg. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekubudirira uye kusimudzira kusvika kumatunhu makuru eChirungu nhabvu, zvine chokwadi kuti vateveri vazhinji vanofanirwa kunge vakabvunza kana Bukayo Saka aine Musikana kana mukadzi. Hongu! wake akanaka mucheche-kumeso anotarisana pamwe nekaitiro kake kekutamba zvechokwadi kumuisa akakwira mukomana wemusikana.
Kubvunza muBubayo Saka's Girlfriend. Kiredhiti Sortitoutsi
Mushure mekuongorora kwakati, Inoonekwa Bukayo Saka asina kuroorwa (panguva yekunyora). Isu tinoziva kuti nekuda kwekusaregerera kwemhando yepamusoro yenhabvu nhabvu yeChirungu, Saka anofanirwa kuve akanyanya kufunga nezvebasa rake pane kutsvaga musikana kana mumwe munhu kuti ave mukadzi wake.
Panguva ino, tinogona kutaura kuti Saka akaita nhamburiko yekuziva kuti asataridza tarisiro paupenyu hwake hwepachivande. Ichi chokwadi chinoita kuti zviome kune blogger sesu kuwana ruzivo nezve rudo rwake hupenyu uye nhoroondo yekufambidzana. Nekudaro, zvichiri kuitika kuti anogona kunge aine musikana asi anosarudza kuti asaite pachena, zvakati kwazvino.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva Bukayo Saka Chako Hupenyu chokwadi chaizokubatsira kuti uwane mufananidzo uri nani wehunhu hwake kusanganisa kubva munhabvu nhau.
Bukayo Saka Chako Hupenyu Hwechokwadi. Chikwereti ku Twitter
Kusangana naye, iwe unozoona kuti Bukayo Saka anorarama uye anoshandisa nzira yekurarama hupenyu hwakarongeka. Zvakare, iye ane hushamwari uye pasi-kune-pasi munhu anowana akasununguka kune vateveri zvakanyanya. Paanenge ari mukudzidziswa, anoteerera kune zvidiki zviduku zvezvinhu uye anovimbisa kuti hapana chakasara mukana.
Kudzokera kuNigeria uye kunyangwe kuUnited Kingdom, shamwari dzaBukayo Saka uye vanhu vemunyika vanomuona sepfuma yenyika iyo inofanirwa kuchengetedzwa zvachose. Ona vhidhiyo pazasi.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Bukayo Saka anodada nemadzitateguru ake uye Nigerian midzi mune nguva dzakanaka nedzakaipa. Sezvo anoshanda, anofara kuve akavaka nzira yake yemhuri yake yekuna rusununguko rwemari anotenda Football.
Bukayo Saka Mhuri uye hama nehama; amai vake, baba, vanun'una, babamunini, babamunini, tete, nanasekuru, varipo kukohwa zvakanakira kuve nekwavo chaiko kuhofisi dzenhabvu dzechiRungu. Panguva ino, all yemhuri yake yemhuri nehama dzake vese vakaita sarudzo yekuziva kusatsvaga kuzivikanwa neruzhinji kunyangwe nzira dzakawanda dzekubatanidza nevezvenhau.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - LifeStyle
Kugwinyira pachigamba uye mafaro kubva pairi ndeye nyika mbiri dzakasiyana dzeBukayo Saka kusvika pamararamiro ake. Kunyangwe achitenda kugadzira mari munhabvu inofanirwa, asi mafambisirwo ayo akasimba akamubatsira kuchengeta mari yake muchiongorora uye yakarongeka.
Senguva yekunyora, Bukayo Saka haibvumidzwe kurarama hupenyu hunowoneka nyore nyore nemaoko mashoma emota dzinodhura, dzimba nezvimwe.
Bukayo Saka Mararamiro- Anodzvinyirira kune kurarama kunodhura
Munyika yemazuva ano yenhabvu yemotokari dzinopenya uye dzakawanda zvedhiyo midhiya dzinoratidza hupfumi uye mararamiro anodhura, tinogona kutaura kuti Bukayo Saka inodonhedza zororo.
Bukayo Saka Zvechikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Haasi iye oga maNigerian kuChikoro: Arsenal FC Academy iri kukurumidza kuva musha wevatambi vazhinji vekuNigeria. Munguva pfupi yapfuura kubva panguva yekunyora, iyo academy yakapa zvidzidzo zvehumhizha kune mana akavimbisa matareji eNigeria - Kubva kuruboshwe kurudyi kunosanganisira Arthur Okonkwo, Armstrong Okoflex, James Olayinka na Xavier Amaechi.
Mamwe Nyeredzi dzeNigerian kuYunivhesiti. Kiredhiti Zuva, BBC, ArsenalCore uye Flickr
Chitendero: Sezvacherechedzwa pazasi, wakeMwana wa Mwari”Uye tsikidzi iyi yakafanana neyaiye waaishanda naye Joe Willock. Kwatiri, kune mukana wakakura wekuti chitendero chaBukayo Saka chiKristu.
Chitendero cheBukayo Saka- Zvakatsanangurwa. Chikwereti kuna IG
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu yeBubayo Saka Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Unai Emery Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Kurume 10, 2019
Sead Kolasinac Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts